Kooxda Manchester United oo dooneysa in Aaron Ramsey qeyb looga dhigto heshiiska Paul Pogba – Gool FM
(Manchester) 06 Maajo 2020. Kooxda Man United ayaa lagu soo warramayaa in ay u furan tahay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Juventus Aaron Ramsey, iyadoo qayb kaga dhigeysa heshiiska ciyaaryahankeeda Paul Pogba.
Iyadoo kaliya hal sano uga harsan tahay qandaraaskiisa, Pogba waxaa loo ogolaan karaa inuu ka tago garoonka Old Trafford inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee soo socda, afar sano kaddib markii uu ka yimid kooxda Juventus.
Kooxda reer Talyaani ayaa muddo dheer la la xiriirinayay inay dib ula midoobi doonaan xiddiga ku guuleysatay Koobkii Adduunka, iyadoo la siinayo inay gaaraan tanaasul dhanka dhaqaalaha ah.
Sida laga soo xigtay Calciomercato, taasi waxay ka dhigeysaa in Ramsey loo isticmaalo culeys dhanka heshiiska ah kaddib olole isku dhafan oo uu ku qaatay Turin.
Inkastoo dhaawacyadu ay doorkooda qaateen, 29-sano jirkaan ayaa kaliya 11 kulan ku bilaawday kooxdiiisa sidoo kale, wuxuu badal ku soo galay sagaal kulan, xilli kooxdiisa Juventus ay sanadkii la soo dhaafay ku guuleysatay horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Marka laga yimaado saamaynta dhaqaale ee faafaha Coronavirus, Man United ayaa sidoo kale rajeyn doonta inay lacag ka hesho Juventus haddii ay u ogolaadaan Pogba inuu mar labaad ku laabto dalka Talyaaniga.
Si kastaba ha haatee, xiddigan ku guuleystay Koobka Adduunka sanadkii 2018-kii ayaa kooxda Man United u saftay 99 kulan, isagoo sido kale u dhaliyay 24-gool tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford.